Ntuzi Onwe Onye Ịkụ Mgbochi China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ntuzi Onwe Onye Ịkụ Mgbochi - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 23 Ngwaahịa maka Ntuzi Onwe Onye Ịkụ Mgbochi)
Ọchịchị onwe onye na-achịkwa anụ ọhịa na-eti mkpu na CE
Ọchịchị onwe onye na-achịkwa anụ ọhịa na-eti mkpu na CE Nkọwapụta ngwaahịa Mbụ anyị ga-achọ ịmepụta ngwaahịa anyị - ọrụ PTC. Kedu ihe bụ PTC? PTC pụtara nchịkwa onwe onye. Ọ dịghị mkpa maka usoro ịchịkwa okpomọkụ. Ọ bụ ụzọ dị mfe nke kpo oku nke na-adịghị mkpa maka okpomọkụ. Ọ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, ya na usoro kpo...
Onye na-eme ka onye ọ bụla mara na ọ na-egwu ya
P roduct Description Defogger dị ala, kwadoro onwe ya maka mpempe ọkụ. Ihe mbadamba ihe a na-agbaso n'azụ igwe ugbo gị. Ozugbo a kwadoro ya, enyo ahụ agaghị emegharị ma na gburugburu ebe mpempe akwụkwọ ahụ. Ọnọdụ okpomọkụ nke mirror a dị oke ezu maka ụgbọ ala ahụ iji kpuchie mirror. A na-ekpo ọkụ ọkụ ma na-ekesa...
Mfe nchịkọta Mbadamba nkwụnye onwe nke okpokoro
Ogwe osisi na-ekpo ọkụ bụ ebe zuru oke maka akụkụ akụkụ anọ, ngwa ngwa ọtụtụ ma ọ bụ ọnụ ụlọ. A na-etinye eriri ọkụ na-ekpo ọkụ na nkedo ntutu nke na-abata n'ogologo akụkụ anọ, na ọtụtụ ebe, nkwụnye onwe ya na-akwado iji mee ka nrụnye dị mfe. Uru & Uru - Egwuregwu Egwuregwu Snow Snow na-agbapụ na eriri ntanetị...
Nnukwu ihe ọkpụkpụ Ịkụ ọkpọ Anya masks kpo oku
Nnukwu ihe ọkpụkpụ Ịkụ ọkpọ Anya masks kpo oku Enweghi ike igosi Igwe ntuputa onu ogugu maka anya Nkpu Anya, o di mma maka anya anyi ma oburu na ike gi na ike gi, anyi nwere ike iji anya ndi ozo kpuchie anya anyi, ma buru ya n'anya m, o ga enyere anyi aka. wepụ anya anyị anya. Enweghi ike ihu uhie nke ihu uzo di...
Nnukwu Onye Dị Elu Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Ndụ
Germinator na-ebu ọkụ Ọkpụkpụ ngwaahịa, * Elu àgwà zuru mkpụrụ tray size propagator. * Ọ ga-ejide nlezianya ruo ọtụtụ afọ * Nnukwu mkpuchi elu ikpochapụ iji chịkwaa okpomọkụ na iru mmiri * Oghere ọrụ dị arọ na oghere drainage. * Otu n'ime ndị kasị mma na ahịa * Ezigbo maka onye mbido na ahụmahụ ahụmahụ Nkọwa...
Elu àgwà ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ kpo oku ihe mgbochi
Ekebe iche maka ụdị dị iche iche mara mma anụ ọhịa 1, Ejiri ikuku infrared radiant okpomọkụ 2, Nyocha kacha ọhụrụ na-etinye carbon eriri - Ọ dịghị agbaji wired ọkụ. 3, Oké okpomọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ na ewepụghị. 4, Na-ehicha mmiri na nhicha dị mfe ma ọ bụrụ na ọ dị nchara. 5, Na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide,...
Ihe Mgbochi Na-ekpo ọkụ maka Motocycle
Nkọwapụta ngwaahịa A na-eji eji aka a na-emepụta ihe ọhụrụ a na-eji aka ya arụ ọrụ na-eme ka ọ dị ọkụ karịa mgbe ọ bụla . Ogologo aka anyị dị ọkụ na- enye gị ohere ịmezi ọnọdụ ọkụ ọkụ ka ị gharazie ịnagide okpomọkụ na-adịghị mma. Ọ dị mfe iji dabara. Ngwa ngwa ikpo ọkụ. Nye gị ọkụ na oyi Voltage: 12.5v, ọrụ ahaziri...
Nkọwapụta ngwaahịa A nkịtị oche na mpe mpe akwa ma ọ bụ ute bụ a table n'echebe-eji mgbe na-arụ ọrụ ma ga-eme ka mmebi desk.But anyị pụrụ iche oche na mpe mpe akwa nwere otu ọzọ ọrụ-heating.Our oche kpo oku na mpe mpe akwa a na-gụnyere anya infrared kpo oku film, a ọhụrụ ụdị nkà na ụzụ na ụlọ ọrụ ọkụ . Ịzụta ihe...
Ntuzi Onwe Onye Ịkụ Mgbochi Ntuzi onwe onye Ịkụ Mgbochi Nkume Na-agba Ọkụ Mgbochi Egwu Ntọala nke Onwe Onye Na-ekpo ọkụ Nkume Igwe Ọkụ Mmiri Ntuzi Na-ekpo ọkụ Nduzi onwe onye Ntuzi onwe onye Na-achịkwa Nkedo maka Wet